Nhau dzeinotevera PUGB yekuvandudza inosvika nhasi paApp Store | IPhone nhau
PUBG yaive yeimwe yegore rapfuura yakarova makomputa. Kubva munaKurume wegore rino, isu zvakare tine nharembozha yatinowana, vhezheni irikugamuchira zvishoma nezvishoma kunatsiridza kuyedza kuenzanisa, sezvinobvira, nePC vhezheni.
Tencent, anovandudza kuseri kwePUBG, nguva nenguva anoburitsa zvigadziriso achiwedzera zvombo zvitsva, mepu, mota ... pamwe nekugadzirisa zviitiko zvepasirese, seHallowen kana Nhema Chishanu. Ehe, paChishanu Chishanu. Nhasi gadziriso nyowani yePUBG Mobile yakatangwa, vhezheni inotipa iyo chimbo chitsva uye ine simba mamiriro ekunze muSanhok semitambo mikuru.
1 Chii chitsva muPUBG vhezheni 0.9.5
1.1 Beryl M762 otomatiki pfuti
1.2 Mota Nyowani muSanhok: Scooter
1.3 Mamiriro ekunze ane simba muSanhok
1.4 Hardcore modhi yekupa yakafanana chiitiko sePC
1.5 Royal Pass Mwaka 4
Chii chitsva muPUBG vhezheni 0.9.5
Beryl M762 otomatiki pfuti
Iyo Beryl M762, chombo chePoland kwakatangira iyo kukuvara kwayo kwakadzikira zvishoma pane kweiyo AKM, iine pfuti inoda kusvika nekukurumidza seGroza, saka kukuvara kwayo pasekondi kwakakwira zvakanyanya kupfuura AKM. Kunyangwe ichipa hukuru hwakanyanya kupfuura AKM, izvi zvinogona kuderedzwa pamwe nezvinowanikwa zviripo.
Mota Nyowani muSanhok: Scooter
Moped yakafukidzwa muchikamu chayo chepamusoro uye ne simba shoma, saka iko chete kushandiswa kunenge kuri kuperera kunze kwenzvimbo munzvimbo dzakatsetseka.
Mamiriro ekunze ane simba muSanhok
Nedzidzo iyi, tichawana mitambo mairi kamwe kamwe Kuchanaya here kana kuti tichawana mhute gobvu uko vanokanganisa vachashaya zvekuita. Iyi shanduko ine simba yaingowanikwa muArcade modhi uye yaingoratidza mhute, isingambonaya.
Hardcore modhi yekupa yakafanana chiitiko sePC
Iyi nzira inobvumira gadzirisa iyo mitambo nezvombo / sarudzo dzatinoda, kuitira kuti hondo iwedzere kuomarara uye inyatsoita hunyanzvi hwevatambi.
Royal Pass Mwaka 4
Hutsva pfuti matehwe, zvisingawanzo zvipfeko, hutsva hunhu zviso, uye magadzirirwo ebvudzi.
Yakagadzirisa iyo redhiyo system.
Yakawedzera mamishini kadhi.
Wakawedzera chiitiko apo mapakeji ane zvisingaite zvidzoreso panguva yeChishanu Chishanu.
Yakavandudza mikana mukati meine mabhokisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Nhau dzeinotevera PUGB yekuvandudza iyo inosvika nhasi paApp Store
Svinura ruvengo kuna mukuru wako neBeat the Boss 4